पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : यस्तो छ अदालतको आदेश (पूर्ण पाठसहित) - नयाँपुल अनलाइन डटकम
The building of the District Court Chitwan in Bharatpur on Friday. Cases related to divorce have been increasing every year. Photo:THT
काठमाडौं। पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणका अभियुक्तहरु टिभी प्रस्तोता रवि लामिछाने, उनका सहकर्मी युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्की तीनै जना आज रिहा भएका छन्। लामिछाने र कँडेल क्रमशः पाँच लाख र तीन लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् भने कार्की साधरण तारेखमा रिहा भएकी हुन् ।
जिल्ला अदालत चितवनका न्यायधीश हेमन्त रावलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछाने, उनका सहकर्मी कँडेल र अस्मिता कार्की रूकुलाई दुरूत्साहनको अभियोगमा आइतबार जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारी वकिलको तर्फबाट गोपिलाल देवकोटा, राजकुमार श्रेष्ठ, स्वागत नेपाललगायत ८ जनाले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादीको तर्फबाट सुशील पन्त, सुभाष पोखरेल र राजु थापाले बहस गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासमा उनीहरुको बयान सकिएपछि थुन छेकको लागि मुद्दाको पक्षमा र विपक्षमा वकिलहरुले बहस गरेका थिए ।
आत्महत्या प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा चितवन प्रहरी र काठमाडौँ प्रहरीको संयुक्त टोलीले सञ्चारकर्मी लामिछाने र कँडेललाई न्यूज २४ टेलिभिजनको कार्यालयबाट साउन ३० गते साँझ पक्राउ गरेर चितवन ल्याएको थियो । अर्की आरोपित अस्मिता कार्कीलाई भने साउन २९ गते नै प्रहरीले काठमाडौँको कलंकीबाट पक्राउ गरेको थियो । पत्रकार पुडासैनी साउन २१ गते चितवनको एक होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । केही समय अघिसम्म पुडासैनी सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमको टिममा थिए ।
चितवन जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा भएका लामिछाने, कँडेल र शुद्ध तारेखमा रिहा भएकी अस्मितालाई पहिलो पटक साक्षी तारेखका लागि असोज ५ गते बोलाएको छ । आज चितवन जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेपछि साक्षी तारेखका लागि मिति तय गरेको हो ।
यस्तो छ अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ :